हातमा सीप छैन ? निःशुल्क सिक्नुहोस् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/हातमा सीप छैन ? निःशुल्क सिक्नुहोस्
काठमाडौँ, २२ साउन । बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोना सङ्क्रमितको दर अझ बढेको छ । बन्दाबन्दी अघिसम्म दैनिक सयभन्दा कम सङ्ख्यामा आइसकेकोे कोरोना सङ्क्रमण दर त्यसपछिको दिनमा निरन्तर माथि जाँदै छ । बन्दाबन्दी खुलेपश्चात् काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित दर झनै बढेको छ । बुधबार मात्र काठमाडौँं उपत्यकामा ६२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडाँैंमा ६२ सहित देशभर ३८१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । उपत्यकामा अझ खतरा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले काठमाडौँका ५७ जना र ललितपुरका पाँच जना गरी कुल ६२ जनामा सङ्क्रमण भएको जानकारी दिनुभयो । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणका क्रममा काठमाडौंँका २७ जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा काठमाडौँका १४ जना र ललितपुरका एक जना, पाटन अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका दुई र ललितपुरका दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका एक, स्टार अस्पतालमा काठमाडौँका एक र ललितपुरका दुई, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा काठमाडौँका ११ र डीआईडीएल प्रयोगशालामा काठमाडौँका एक जनामा कोरोना देखिएको हो । प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा छ हजार ३५९ को पीसीआरबाट गरिएको परीक्षणमा थप ३८१ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो । कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ३९० पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६० पुगेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ । देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार १७४ रहेको बत९ाउँदै डा। गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा थप १३० जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएको बताउनुभयो । योसहित डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या १५ हजार १५६ पुगेको छ । बुधबार देशभरका क्वारेन्टाइनमा नौ हजार ९२५ जना व्यक्ति छन् ।
इटहरी । सुनसरीको इटहरी–५ का २७ बर्षीय एक युवाले शुक्रबार विहान फेसबुकमा लेखे, ‘कोरोनाको विश्वयुद्ध जितेर सातौं दिनमा अस्पतालबाट फर्किदै छु ।’ फेसबुकमा स्वागत तथा बधाई भन्दै कमेन्टको बर्षा भइरहँदा उनी धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञा प्रतिष्ठान छाड्दै थिए । कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुन पाएकोमा उनी दंग थिए । घर फर्किन पाउने भएर उत्तिकै उत्साहित थिए । तर बाहिरको वातावरण अर्कै बन्यो । छरछिमेकीले उनलाई घरमा बस्न दिएनन् । ‘हामीलाई रोग सरे को जिम्मेवारी हुन्छ भन्दै छिमेकीले बहिष्कार गरे,’ उनले भने,‘घरमा तालाबन्दी गर्नेसम्मको धम्की दिएपछि बाध्य भएर होटलमा बस्न थालें ।’ उनले कहिलेसम्म होटलमा बसेर निरोगिता पुष्टि गर्नुपर्ने हो रु उनलाई खेद्ने समाजले भनिदिएन् । ‘आज अरुलाई पर्ने समस्या भोलि आफूलाई पर्छ भन्ने कस्तो नबुझेको,’ उनले भने,‘रोगभन्दा पनि समाजले मार्ने रहेछ ।’ धनुषा जनकपुर बस्दै आउका उनलाई १८ दिनअघि ज्वरो आएको थियो । उनी स्वास्थ्य जाँचका लागि १९ गते धरान गए । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनी स्वाब दिएर घरमा ‘आइसोलेट’ भएर बसेका थिए । श्वासप्रस्वासमा सामान्य समस्या थियो । साउन २२ गते उनमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भयो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ । उनी अघिल्लो शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचारपछि गत बुधबार स्वाब जाँच गर्दा नेगेटिभ आएपछि शुक्रबार घर फर्किएका थिए ।